Eboolaan maali? Akkmitti nama qaba? Akkamitti ifirraa eegan….Dr. Abdulsamed Mohammed Yusuf -
Eboolaan maali? Akkmitti nama qaba? Akkamitti ifirraa eegan….Dr. Abdulsamed Mohammed Yusuf
Tags Dr. Abdusamad Mohmaed Ebola fayyaa viirusa
Previous Gucnii kee hin dhaamnee
Next Swedish Amnesty calls for a change in the law with tougher requirements for Swedish companies operating internationally.